MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 900
>poem of Ye Yint Thet Zwe
>Local Private Clinics turn away flu patients
>3 youTube video collection by MoeMaKa - short film and document
> ရုပ်ရှင်မင်းသား မြတ်လေးမောင်စွမ်းရည်အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈ မြတ်လေး (ပန်းချီ ညိုဝင်း) ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဟာ အများအားဖြင့် ရန်ကုန် မြို့တော်မှာ အနေများပါတယ်။ ကျနော်က မန္တလေးမှာ ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေနဲ့ နီးစပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။...
> ကဗျာဆရာ အောင်ဝေး ခရမ်းပြာမြင်းရိုင်း ကဗျာစာအုပ်ထုတ် ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈ ဂျပန်က အာဟာရ မြန်မာစာအုပ်တိုက်က ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာကဗျာဆရာ အောင်ဝေးရဲ့ ကဗျာ ၂၆ ပုဒ်၊...
> အောက်တိုဘာလ စာကိုး စကားကိုးအောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ” နအဖအစိုးရကို ဖားပြောတာလည်း မဟုတ်ဘူး တချို့ သူမှားတာရှိတယ်။ မှားတာ တမတ်ဖိုးပေမယ့် အောက်က သူက ခိုင်းထားတဲ့တပည့်က သူ့အာဏာတမတ်ဖိုးပေးလိုက်တာကို တကျပ်ဖိုး...
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 14 October 30 th 2008...
> ကျွန်တော်နှင့် ၃၁ ဘုံ မြို့သားများနေဘုဏ်းဝေအောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ သူမကို သတိရလို့ လေချွန်မိတာပါ။ နတ်ဆိုးတွေကို လက်ယောင်ပြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားရှင် ခင်းထားတဲ့လမ်းမှာ ကျွန်တော် အတော်ဆန့်လိုက်တော့ အတ္တနဲ့ နည်းနည်းလေး...
> ကာတွန်း မောင်ရစ် – ကျောက်ခေတ် ငြိမ်းချမ်းရေး အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ (ပြန်လည်ဆန်းသစ် ကာတွန်း) No tags for this post. Related posts No...
> ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ တတိယမြောက် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့၊ ၇ ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အီတိုး၏ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲများ၊ ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရ...
> ဘီဘီစီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ မြန်မာလိုဖတ်နိုင်ပြီ မိုးမခအထောက်တော် ၂အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အသံလွှင့်ဋ္ဌာနက ၎င်း၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖော်ပြလိုက်သည်။ ယခင်က အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ရာမှ ယမန်နေ့က စတင်ပြီး...
> နာဂစ်ကို အမြတ်ထုတ်ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် စစ်ဗိုလ်ချုပ် ညွန့်ထွေး အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ နာဂစ်မုန်တိုင်းက စစ်အစိုးရရဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ပြိုကွဲအောင် မတိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ မေလက နာဂစ်အပြီးမှာပဲ စစ်အစိုးရက သူတို့...
> မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် စေတနာရှင်များ၏ Child Aid Foundation က ပြုစုကူညီထောက်ပံ့ထားသော မိဘမဲ့ကလေးသူငယ်များ စာရင်း ထုတ်ပြန် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် စေတနာရှင်...
> ၈၈ အရေးတော်ပုံက ပေါ်ထွန်းလာသည့် ကျောင်းသားတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းခြင်း အနှစ် ၂၀ ပြည့် ပို့စကဒ်ထွက်ရှိ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၎င်းတို့ ၀က်ဆိုက်ကို သည်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။...
> ဘရာဇီး နှင့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘော်လုံးပွဲဓာတ်ပုံသတင်းအောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ယမန်နေ့က အောင်ဆန်းကွင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဘရာဇီးအသင်း နှင့် မြန်မာအသင်းတို့၏ ဒုတိယပွဲစဉ်မြင်ကွင်း။ နာဂစ်မုန်တိုင်းရန်ပုံငွေအတွက် ပြုလုပ်သည့် ဘော်လုံးပွဲဖြစ်သည်။ ပရိသတ်တသောင်းခွဲကြည့်ရှုခဲ့သော အဆိုပါပွဲစဉ်တွင် တဘက်တဂိုးစီဖြင့် သရေကျသွားသည်။...
> “- – ပညာရေး၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူ၊ သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်မှု စသည့် အရေးကိစ္စများတွင် လူနည်းစုများအဖြစ် အထူးကာကွယ် စောင့်ရှောက် ဦးစားပေးမှုတို့ကို မြန်မာတို့ မရရှိ၊ မသိရှိရဘဲ ဥပက္ခာပြုခံထားရ...
> ၀င်းဖေလွယ်အိတ် အမှတ် ၅ဦးသုခ၊ ဦးထွန်းဝေ၊ ဦးသိန်းဖေမြင့် နှင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းများဝင်းဖေ အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များခင်ဗျား၊ ဒီတပတ်တော့ အပြောင်းအလဲကလေး ဖြစ်သွားအောင် “၀င်းဖေလွယ်အိတ်”ထဲက ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်တာကလေးတွေကို ဆွဲထုတ်ပြဖို့...
> ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် စာပေဟောပြောပွဲများ ဆက် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၈၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာမှာ ဧည့်သည် စာရေးဆရာ ၄ ဦး...
> Remembering Masoeyein Sayadaw U Kovida (Sasana Moli) Part 3, Talk with Burmese Community at SF Bay (16th Dec...
> ( animation by akouri.blogspot.com ) တနင်္ဂနွေ နံနက်ခင်း၊ ဟော်လိုဝင်း နှင့် ရင်တွင်းဝေဒနာအရှင်ဉာဏိကအောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့။ နံနက်စောစော အချိန်ရလို့ အနီးအနားရပ်ကွက်ထဲကို လမ်းလျှောက်ထွက်ဖြစ်တယ်၊...
> White Rainbow Poem Festival – Part2MoeMaKa VDO October 27th, 2008 No tags for this post. Related...
> သမ္မတလောင်း အိုဘားမား အခု ၄၇ နှစ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ တုံးက ဒေါ်စု ၄၃ နှစ် မောင်ရစ် အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ မက်ကိန်းနဲ့ အိုဘားမား...
> ဂျမားတို့အဖိုးဇော်မင်း (လူ့ဘောင်သစ်)အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ သူ့မှာ ဗမာနာမည် ရှိပေမဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးက ငယ်ငယ်တည်းက “ဂျမား” ဆိုသော အိမ်နာမည်ကိုသာ ခေါ်ကြသောကြောင့် ဗမာနာမည်ကို ဘယ်သူမှ မမှတ်မိတော့။ ဂျမား၊...
> မိုးမခရဲ့ ရေဒီယိုချစ်သူများ ဆစ်ဒနီ အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ထရံပေါက်ကြားက နေပြောက်ကလေး – ခင်ညွန့်ရည် မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ ၁၄ ကြိမ်မြောက် KNU ကရင်အစည်းအရုံး ကွန်ဂရက်...
> လူရွှင်တော် ရပ်ဆဲပီတာ(Russell Peters)မိုင်မြစ်ကြီးနားအောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈ တနေ့က မိတ်ဆွေတယောက် အီးမေးပို့ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုလင့်ခ်ကို ကြည့်မိတော့ တော်တော်လေး သဘောကျသွားတယ်။ ဒါနဲ့ အခြားသူတွေကိုလည်း ကြည့်စေချင်တဲ့စိတ်က ပေါ်လာကြောင့် ဒီစာကိုရေးမိပါတယ်။ (စာနောက်ဆုံးမှာ...
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၀)ရွှေပြည်ကြီး နီးအောင်ပင်လှမ်းချင်တော့မာမာအေးအောက်တိုဘာ၂၆၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊...
> မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်း မရှုမလှ ကျဆင်းနေ မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်) အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ မိုးကုန်၊ ပွင့်လင်းရာသီမှာ ပြည်ပခရီးသွားတွေ မြန်မာပြည်ကို ရောက်မလာသေးပါဘူး။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင်...
> တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ဒါပေမယ့် သမိုင်းမှာ လမ်းမပျောက်ဖို့ မောင်ရစ် အောက်တိုဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ အခု တင်ဆက်မှာက ရုပ်သံအစီအစဉ်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာတင်မိုးနဲ့ စကားလက်ဆုံ (၂၀၀၆ ဒီဇင်ဘာ ခရစ္စမတ်ကာလ)။...
>(Photo – Aung Way & His Son at White Rainbow Poetry Reading Ceremony, 6th May 2006) ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း(၁၃) အောင်ဝေး အောက်တိုဘာ...
> ဗန်းမောင်တင်အောင် ကွယ်လွန်ခြင်း နှစ် ၃၀ မြောက် အခမ်းအနားကျင်းပ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ကိုလိုနီစနစ်၊ နယ်ချဲ့စနစ်နှင့် အာဏာရှင်စနစ်ခေတ် တလျောက်လုံး တော်လှန်သော စာရေးဆရာအဖြစ်...
> ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲဓာတ်ပုံသတင်းအောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈၂၀၀၈ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အင်းလေးဒေသ ဖောင်တော်ဦးဘုရားပွဲတော်တွင် လှေဖြင့် ဘုရားပင့်ဆောင်လာသော ဒေသခံ အင်းသားများ။ (အောက်တိုဘာ ၁၂ တွင် ရိုက်ကူးထားသောပုံများဖြစ်သည်။) (photos:AFP) No tags for...
> သခင်ပေါက်စ ထောင် ၆ နှစ်ဓာတ်ပုံသတင်းအောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈လွန်ခဲ့သည့် ၉ နှစ်ခန့်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ တွေ့ရသော ဒေါ်ဝင်းမြမြ (အလယ်မှ၊ အင်္ကျီအဖြူနှင့်)။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့သူအချို့သည်...
> ပန်းချီဆရာ ၀သုန်ရဲ့ ဈာပနကို စာပေအနုပညာရှင်နှင့် ပရိသတ်များ စည်ကားစွာ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃၊ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈ မြန်မာ စာနယ်ဇင်း သရုပ်ဖော် ပန်းချီလောကမှာ ထင်ရှားတဲ့...
Page 900 of 952«1...898899900901902...952»